Fomba fikarakarana hoya ny fomba hampiroboroboana ivoho ao an-trano - Indostrian'ny indostria - 2019
Ny fomba tokony hikarakarana hoya ao an-trano
Hoya - plant ampelnoe, dia ny karazan-kazo madinika sy Lian.
Antsoina koa hoe ivy wax.
Hoya dia mitombo any atsimo sy atsimo atsinanan'i Azia, Polinezia ary Aostralia.
Zavatra mahaliana! Ny zavamaniry dia nomena anarana hoe Scottish scientist ho fanomezam-boninahitra an'ilay zalahy mpikaroka anglisy Thomas Thomas, izay nitombo teo amin'ny zaridainan'ny Duke of Northumberland.
Toerana sy fahazavana
Mandrindra ny hafanana: fahavaratra-ririnina
Hoody famokarana ao an-trano
Tena tsara ny fitomboan'ny toe-javatra
Hoy i Hoya tia mozika tsara, afaka mandefitra mora foana ny masoandro. Nefa amin'ny masoandro mavitrika, eo amin'ny ravin'ny voaloboka dia mety handoro ny hoditra.
Hoya no tsara indrindra amin'ny varavarankely andrefana sy atsinanana. Raha toa ny tafika, na izany aza, dia eo amin'ny varavarankely atsimo, avy eo amin'ny lohataona, tsara kokoa ny mamorona hazavana manify (manipy tulle eo amin'ny varavarankely).
Zava-dehibe izany! Hoya dia tsy afaka mamelana ny varavarankely avaratra.
Amin'ny lohataona, ny mari-pana tsara indrindra ho an'ny hoyi, izay lehibe amin'ny toe-java-manan'aina, dia 25 degre Celsius, ary amin'ny ririnina - tsy latsaky ny 16 degre.
Raha mihoatra ny 20 degre Celsius ny ririnina, amin'ny ririnina dia ho lasa ranomainty sy tsy misy dikany ny voninkazo.
Manolo-kevitra ny mitarika matetika ao amin'ny efitrano misy ny hoya, fa tsy mamorona drafitra, satria mety maty ny zavamaniry.
Hoya - zavamaniry voajanahary. Ny Vine dia be rano avy amin'ny Martsa ka hatramin'ny Oktobra, saingy mila ny fidiovana mafana indrindra mandritra ny fahavaratra.
Raha vao hitanao fa maina ny tany, dia mila manondraka an'ilay zavamaniry miaraka amin'ny rano misaraka ianao. Aza hadinoina koa ny mikarakara ny hoey: mba hanala ny tsilo sy ny tany ambanin'ilay zavamaniry.
Hatramin'ny volana Novambra, dia tokony hampihena ny rano fisotro. Amin'ny ririnina dia tsy mitaky fahamonoana be loatra ny zavamaniry, mba hahafahany mahazo rano mandritra ny 4-5 andro aorian'ny nanesorana ny rambony. Ny hafanana rano ho an'ny fanondrahana amin'ny ririnina dia tokony hihomehezana.
Fantatrao ve? Raha ny renirano hoya, dia maty ny fakan-drivotry ny zavamaniry ary manomboka ny vanim-potoana mitombo.
Azo atao ny manatsara ny fitomboan'ny zavamaniry sy ny voniny, amin'ny lohataona sy ny fararano, mamafy izany amin'ny rano amin'ny hafanana 30-40 degre ho an'ny antsasak'adiny, ary ny tany miaraka amin'ny fakany mandritra ny 2 ora farafahakeliny.
Hoy i Hoya dia tsy mitaky zavatra ara-pahasalamana. Saingy tsy dia ilaina loatra ny famafazana ny zavamaniry ao anatin'ny lohataona sy fahavaratra.
Zava-dehibe izany! Rehefa mamafy ny hoya dia tsy tokony hianjera eo amin'ny voninkazo ny fahantrana.
Mandritra ny vanim-potoanan'ny fitomboana, hoya dia tokony homena isaky ny 2-3 herinandro. Manoloana ny fampiasana zezika mineraly ampy ho an'ny hoya. Amin'ny ririnina dia tsy mila sakafo ny zavamaniry.
Mila mahafantatra! Alohan'ny hanombohanao mihinam-be hoyu, mila manetsaka ny zavamaniry ianao (ho an'ny tovovavy tanora, mila fambolena isan-taona).
Ilaina ny manamboatra fotsy ho an'ny olon-dehibe isaky ny telo taona. Ny toeram-ponenana dia maniry kely ny tany na ny atiny tsy miandany (pH 5.5 hatramin'ny 6). Ankoatra izany, ilaina ny manetsaka tanora kely isan-taona (hatramin'ny 3 taona).
Hoya sarotra ho an'ny tany. Ny fonosana tsara indrindra ho azy io dia ny famokarana tanimanga tanimanga, alimo sy ravin-tany (2: 1: 1). Ny dika faharoa amin'ny tany: clay-sod, ravin-tany, fasika sy tavoahangy (2: 1: 1: 1).
Rehefa mifidy tany ianao dia tokony hijery ny karazana hoya. Ohatra, i Hoya Prekrasnaya dia tia volom-borona, vovobony, tavy, fasika ary ampahany kely amin'ny charcoal.
Zava-dehibe izany! Hoey mandritra ny fambolena sy ny fambolena dia mila drafitra tsara.
Ny famokarana divay mahavokatra ao an-trano dia azo atao amin'ny fomba telo: hoya avy amin'ny voa, fanasivanana ary fametahana amin'ny alàlan'ny laying.
Raha lasa tompony ianao hoi voa, izy ireo dia nambolena tamin'ny tany, izay misy ny fanangonana ny tany sy ny moron-drano. Manondraka be dia be ary rehefa afaka herinandro, dia manomboka mitsimoka ny masomboly. Ny voa avy amin'ny hai dia tokony mijanona ho maina, nefa tsy tondraka rano. Ny voatabiha dia tokony hotazonina ao amin'ny toerana mafana sy mahazatra.
Mba hiarovana ireo tsimok'aretina tanora avy amin'ny aretin'ny menaka dia afafazo azy ireo amin'ny vahaolana amin'ny zava-mahadomelina varahina. Rehefa afaka 3 volana, rehefa mamoaka ravina roa ny tifitra, dia manamboatra azy ireo ho potipotika.
Zavatra mahaliana! Mividy voan'ny homemade hoi ao an-trano saika tsy azo tanterahana.
Ny fomba fiasa manaraka dia ny cuta hoya. Io no heverina ho fomba azo itokisana sy mora azo hananana voly.
Ny famotehana izay tianao hambolena dia tokony ho 10 santimetatra. Tokony hanana ravina sy hoditra roa izy io. Afaka manongotra ao anaty rano sy ny tany ny tifitra Choi.
Rehefa miorim-paka ao anaty rano ianao, dia mila fepetra kely vita amin'ny foitra. Ao anatin'ilay saribakoly, manaova lavaka fanesoana. Aza adino ny mameno rano amin'ny rano.
Mialà ravina ambony eo amin'ny tadiny, ary ento ny ampahany ambany amin'ny fanatsarana ny fototeny. Hetezo ny tifitra amin'ny lavaka ao amin'ny foibe ao anaty fitoeran-drano.
Rehefa mamaka ny tsimok'aretina dia 22 degre ny hafanana ny hafanana indrindra. Aza hadinoina fa ilaina ny fanavahana tsy tapaka ho an'ny fehezanteny.
Mba hanaovana izany, mametraka kitapo eo amin'ny fitoeran-drano misy tavy, mamela lavaka rivotra. Noho izany dia tsy hisy intsony ny hamandoana, fa ny tadiny dia tsy hahatsiaro ho matiantoka.
Nanomboka nitsimoka ny takelaka Hoya taorian'ny 2 herinandro. Ilaina ny mamboly ny fotodrafitrasa amin'ny tany amin'ny toerana maharitra, satria ny fambolena ny fakany dia nanamaivana ny loko, ary ny sodina dia ho lasa mora kokoa.
Azonao atao koa ny mikarakara avy hatrany eo amin'ny fonosana. Tokony ho maivana ny tany, mba hahafahan'ny rano misononona mivelatra.
Alohan'ny fambolena dia ilaina ny fandidiana miasa ny fotony. Ny vilany sy ny fanaka dia tsy maintsy sterilized, Raha toa ny zavamaniry tsy voaofana dia mora azo alaina amin'ny aretina sy ny bibikely isan-karazany.
Tokony hambolena haingam-pandrefesana toy izany ny fandrakofana fa ny tany ambany ambany dia rakotry ny tany. Ny fitomboan'ny fitotongana toy izany dia ilaina ihany koa ny fanatsarana tsy tapaka.
Manatanteraka fomba fanao mitovy amin'ny fomba teo aloha izahay: mametraka kitapo plastika mangarahara miaraka amin'ny lavaka eo amin'ny tapaka. Rehefa afaka 3 herinandro dia hisy ny famantarana ny fitomboan'ny zavamaniry.
Ny fomba fahatelo dia hoya reproduction amin'ny layering. Ity fomba ity dia ahafahana mahazo ny voninkazo amin'ny taona famolavolana. Eo am-pototry ny zavamaniry tranainy iray, makà kely kely ary esoriny amin'ny masajy mavo, manafana azy amin'ny plastika plastika.
Rehefa miseho eo amin'ny toeran'ny lantihy ny fakan-katsaka, dia tapaka sy apetraka ao anaty vilany maharitra ny tapany amin'ny fakany.
Zava-dehibe izany! Ho an'ny fanenoman-tena amin'ny fampiasana layering, dia asaina manangona ireo tsimok'aretina ireo.
Hoya - zavamaniry mahaliana sy mahafinaritra. Fikarakarana sy famokarana tsy mendrika. Amin'ny fanaraha-maso tsara dia ho hitanao isan-taona ny voninkazo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny fomba tokony hikarakarana hoya ao an-trano